Sakafo 7 misoroka sy mitsabo ny « dépression »
Ireo sakafo 5 be manezioma
Araka ny hafatry ny mpiasan’ny fahasalamana dia tokony mila manezioma 300 hatramin’ny 400 mg isn’andro ny olon-dehibe raha 10 ka hatramin’ny 30 mg kosa izany ho an’ny ankizy.
Ny atao mba tsy hihinan-kena be loatra
Mampidi-doza ho an’ny fahasalamana ny fihinanan-kena diso betsaka loatra. Tsy mety koa anefa ny mifady azy tanteraka satria mila ny fer sy zinc ary ny vitamine B12 entiny ny vatana mba ho entiny miasa. Ahoana ny atao mba ihinanana azy amin’ny fatra antonony tsara. Atoronay anao :
Sakafo matsiro fa tsy matavy …izao atao
Sakafo tsy matavy sy be menaka loatra ihany no mahasalama sady vahaolana amin’ny hatavezana diso tafahoatra.
Sakafo 10 manala sy misoroka ny rarin-tsaina
Fahavalon’ny fahasalaman’ny vatana ny rarin-tsaina na ny « stress ». Mitarika ny vatana hahazo fahazaran-dratsy ara-tsakafo mantsy ny toe-po miovaova.
Ny marina sy tsara ho fantatra momba ny ranom-boasarimankirana
Tsy iadian-kevitra fa mitondra otrik’aina mahasoa sady mahasalama ho an’ny vatana ny voasarimankirana. Marobe kosa ny hevitra re mahakasika azy sy ny fomba isotroana azy. Iza amin’ireny no diso ary iza no marina ? Mamaly ny matihanina amin’ny fomba fisakafo iray.
Raha mahatsiaro ho malahelohelo, te hitsakotsako zava-mamy, na be menaka, tsy dia mazoto mihetsika fa kamokamo, dia mety ho voan’ny fahaketrahana, na « depression » ianao.
Isan’ny vahaolana amin’izany ny fampitomboana ny famokaran’ny atidoha ny « serotonine », ilay tsiry mpanentan’ny fahasambarana. Misy sakafo mamporisika izany ary ireto avy izy ireo :
Feno mpanala arafesina sy maneziôma ny sôkôlà. Araka ny fanadihadana maro dia manampy ny olona malahelo hiverina hitsiky indray izy ity. tsy tokony hihoatra ny 80grama isan’andro andro anefa, satria sady matavy no mamy ihany ny sôkôlà. Singany 2 isan’andro dia efa ampy hampamiramiran’endrika.
Anana, legioma maitso ary salady
Feno vitamina B9, maneziôma ary mpanala arafesina ny anana toy ny epinara, ny anandrano ary ny laisoa ka tokony hanina isan’andro, raha te ho miramirana sy falilafy foana.
Be proteina atao hoe : « tryptophane » ny atody, ka azo lazaina ho sakafo mahafalifaly ihany koa. Tombony ny fisian’ny vitamina D ao anatiny, izay manampy ny vatana ho mirana.
Feno vitamina B9, izay mandrisika ny vatana hamokatra sérotonine, ny fianakavian’ny voasary toy ny loranjy, ny mandarina sy ny papelimosy, ka tsara hanina matetika. Azo hanina amin’izao, atao tsindrin-tsakafo na atao salady izy. Mety koa ny mampiaraka azy ireny amin’ny trondro, ohatra.
Saumon sy sardine
Trondro be omega-3 sy vitamina D ny saumon sy ny sardine. Sady miaro ny fo izy no mahatonga ho mirana sy faly anaty.
Be oméga-3 sy mpanala arafesina ary be vitamina B9 ny voan’ny “lin”. Ity singa farany ity no tena mandrindra ny fihetseham-po. Rehefa totoina izy no mora raisin’ny vatana tsara. Atao amin’ny salady na afangaro amin’ny ny tsindrin-tsakafo no fanaovana azy. Eny amin’ny toeram-pivarotam-panafody sasany no ahitana azy ity.
Ahitana proteina antsoina hoe « tryptophane » ihany koa ao anatin’ny « avoine ». Io singa io dia mandrisika ny atidoha hamokatra « sérotonine ». Sakafo maraina moa no fihinanana ny « avoine » ampiarahina amin’ny ronono izy, amin’izay fotoana izay.